के हो बर्डफ्लु, कसरी अपनाउने सावधानी? – Health Post Nepal
के हो बर्डफ्लु, कसरी अपनाउने सावधानी?
२०७८ फागुन १६ गते १३:५४
काठमाडौं – केही दिनअघि चितवनसहित काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा बर्डफ्लु पुष्टि भएको थियो। चितवनस्थित भरतपुर महानगरपालिका-८ मा रहेको महतो पोल्ट्री इन्डस्ट्रिज प्रालिद्वारा सञ्चालित फर्ममा पालिएका सबै कुखुरा नष्ट गरिएका थिए भने मासु पसल र त्यस वरपर पालिएका कुखुरासमेत नष्ट गरिएका थिए। यस्तै काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–३ र चितवनको राप्ती नगरपालिका-६ मा पनि बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि हजारौं कुखुरा नष्ट गरिएको थियो।
काठमाडौंसहित केही जिल्लामा बर्डफ्लु देखिएपछि उपत्यकाको पूर्वीनाका तथा कुखुरा उत्पादनमा मुलुककै दोस्रो काभ्रेपलाञ्चोकमा उच्च सतर्कता नै अपनाइएको छ। यसका लागि जिल्लाको मुख्य नाकामा पन्छीको जाँचलाई कडाइ गरिनुका साथै स्थानीय तहलेसमेत सरोकारवालासँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।
बर्डफ्लुको प्रकोपले कुखुरा व्यवसायीमा चिन्ता बढेको छ। प्रकोपले किसानको जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमासमेत नराम्ररी असर गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार भाइरस संक्रमण मानिसमा सर्ने सम्भावना प्रायः संक्रमित जनावर वा दूषित वातावरणसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा बढी हुन्छ। मानिसबाट मानिसमा सर्ने सम्भावना यसमा कमै देखिएको छ।
बर्डफ्लु वा एभियन इन्फ्लुएन्जा भनेको टाइप ‘ए’ भाइरसको संक्रमणले हुने अवस्था हो जुन सामान्यतया जंगली जलचर चराहरूमा देखा पर्दछ। यसले घरेलु कुखुरा, अन्य पंक्षी र जनावरलाई पनि संक्रमण गर्न सक्छ। यद्यपि, एभियन फ्लूका भाइरसहरूले सामान्यतया मानिसहरूलाई सङ्क्रमण गर्दैन र यस्तो संक्रमण दुर्लभ छ। तर, मानिसमा फैलिनबाट रोक्न सावधानी अपनाउन आवश्यक छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र डब्लुएचओले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिकारीहरूलाई जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार कुखुरा र पंक्षीजन्य अन्य मासुलाई राम्ररी पकाएर खाँदा मात्रै पनि यसबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ। यद्यपि, यस रोगबाट प्रभावित कुनै पनि पंक्षीहरूको मासु उपभोग नगर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
मानिसमा बर्डफ्लुका लक्षण
बर्डफ्लु भएका मानिसहरूमा देखिने केही सामान्य लक्षणहरूमा खोकी, ज्वरो, घाँटी दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, टाउको दुख्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने समावेश छ। तिनीहरूले निमोनिया, आँखा रातो बनाउने (कन्जक्टिभिटिज), श्वासप्रश्वासमा समस्या, मृगौलाको कार्यमा असर र मुटुको समस्या जस्ता जटिलताहरू पनि विकास गर्न सक्छन्।
प्रसारण रोक्नको लागि एन्टिभाइरल उपचारको अतिरिक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपायहरू पनि अवलम्बन गर्नु पर्छ। जस्तो हात राम्रोसँग सफा गर्ने र त्यसपछि सुकाउने। खोक्दा वा हाछ्युँ गर्दा मुख र नाक छोप्ने, टिस्युको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई राम्ररी डिस्पोज गर्ने। बिरामी व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कबाट बच्नुस्। साथै, कसैको आँखा, नाक वा मुख नछुनुहोस्।
यस्तै मासु खाँदा राम्रोसँग पकायर मात्र खानुस्। बिरामी कुखुराको र बर्डफ्लु पुष्टि भएका क्षेत्रका कुखुराको मासु सेवन नगर्नुस्। मासु राम्रोसँग पखालेर मात्र पकाउने गर्नुस्।
काठमाडौं र चितवनमा बर्डफ्लू देखिएपछि सचेत रहन मन्त्रालयको आग्रह
बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि हजारौं कुखुरा नष्ट
काठमाडौं उपत्यकामा बर्डफ्लु देखिएपछि काभ्रेमा उच्च सतर्कता